ပင်ပန်း နေတဲ့ မနက်ခင်းမှာ အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် အစားအစာတွေ - Hello Sayarwon
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း » ကျန်းမာစွာချက်ပြုတ်ခြင်း
Update Date စက်တင်ဘာ 15, 2020 .2mins read
စရိတ်သက်သာ အာဟာရပြည့်ပြည့် စားနိုင်ဖို့ ရိက္ခာ စုနည်း
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကြုံလာရတဲ့အခါ ရိက္ခာ ဝယ်ယူစုဆောင်းရတာလည်း အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ စရိတ်နည်းနည်းနဲ့ အာဟာရပြည့်စေဖို့ ဘာတွေ စုဆောင်းကြမလဲ။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, ကျန်းမာစွာချက်ပြုတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 9, 2021 .2mins read
ကြက်ဥ အမျိုးအစားနဲ့ အာဟာရဓာတ်များ
ကြက်ဥ တွေက ပုံစံမတူရင် အာဟာရဓာတ် ကွဲသွားနိုင်သလား။ တောကြက်ဥနဲ့ စက်ကြက်ဥ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး အာဟာရရှိသလဲ။ စျေးကြီးတဲ့ ကြက်ဥက ပိုကောင်းတာလား။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စက်တင်ဘာ 7, 2021 .2mins read
ကိုဗစ်လူနာ ကုသရေးမှာ အရေးပါတဲ့ အာဟာရ
ကိုဗစ်လူနာ တွေအတွက် အစားနဲ့ ရေက ဆေးပါ။ ဆေးလိုမျိုး အချိန်မှန်မှန်၊ ပမာဏမှန်မှန် ကျွေးမှသာ လူနာက အမြန်သက်သာလာမှာဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 7, 2021 .3mins read
ရေညှိညို စားရင်းရမယ့် ကျန်းမာရေး တွေက ဘာတွေများလဲ....... ရေညှိညို စားရင်း အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စက်တင်ဘာ 6, 2021 . 1 min read
အေးခဲခြင်းဆိုင်ရာ myths များစွာ
ဘေဘီလေးက သရက်သီး စားလို့ရလား……….
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 24, 2021 .2mins read